मोना डी पासकुआ - थर्मोमिक्स रेसिपीहरू ThermoRecines
इस्टर बाँदर अर्गोनियन, क्याटालान, भ्यालेन्सियाली क्षेत्रहरू र मर्सियाको केही क्षेत्रहरूको पनि मिठो मीठो हो। यो प्रतीक हो कि लेन्ट र तपाइँको परम्परा समाप्त भएको छ।
परम्परागत रूपमा यो ईश्वरीय आइतवार मा आफ्नो देवता मा यो देउता थियो र यो समयमा यो लिन को लागी परम्परागत छ इस्टर दिनहरूमा खाजा। मलाई अझै पनी याद छ जब मेरा हजुरबा हजुरआमाले सँधै मलाई चकलेट अण्डाहरू दिनुहुन्थ्यो।
यहाँ म्याड्रिडमा हाम्रो कस्टम सँगै खान र स्वादिष्ट मिठाई वा खाजा लिने थियो फ्रेन्च टोस्ट
यो मेरो पहिलो बाँदर भएको छ। मैले वेबमा तपाईको अनुरोध पछि यो तयार गरेको छु फेसबुक समूह। मैले यसलाई बनाउने र विशेष गरी यसको सजावट गर्ने समय पाएको छु। मलाई लाग्छ कि केहि बर्षहरुमा म यसको स्वाद लिने छु र म तिनीहरुलाई सुधार गर्न प्रोत्साहित गर्नेछु। तिम्रो के बिचार छ!
1 इस्टर मोना
तपाईंको ईस्टर स्नैक्सको लागि एक नुस्खा।
2 अन्डा सेतो
२० बदामको पीठो
जर्दी क्रीम को लागी:
१०० ग्राम पानी (थप एक चम्मच)
स्ट्रबेरी जाम को २ g० ग्राम
सिरप मा चेरी
हामी ब्लेडमा पुतली राख्छौं र अण्डा गोरा, sugar० ग्राम चिनी र नुन थप्छौं। हामी गोरा हिउँ प्रोग्रामिंग को विन्दु माउन्ट गर्दछौं Minutes मिनेट, गति २। ठूलो कचौरा र रिजर्भमा हटाउनुहोस्।
पुतली हटाए बिना, हामी अण्डाहरू र बाँकी चिनी राख्छौं। हामी प्रोग्राम Minutes मिनेट, १००º, गति १।
जब समाप्त हुन्छ, हामी अन्य रिप्रोग्राम गर्दछौं Minutes मिनेट, गति,, बिना प्रोग्रामिंग तापमान.
एउटा कचौरामा, खमीरसँग फ्ल्राउर्स मिलाउनुहोस् र यसलाई गिलासमा थप्नुहोस्। यसलाई मिक्स गर्दै Seconds० सेकेन्ड, गति 6।
हामी ब्लेडबाट पुतली हटाउँछौं र बरफको बिन्दुमा आरक्षित गोरा सम्मिलित गर्छौं, खामिएका आन्दोलनहरू बनाउँदै।
मटरको साथ करिब २ 23 वा २ cm सेमी व्यासको मोल्डलाई ग्रीस गर्नुहोस्। र हामी मिश्रण मोल्डमा खसाल्छौं, करीव minutes० मिनेट को लागी बेकिंग। अनमोल्ट गर्नुहोस् र चिसो दिनुहोस्।
सफा गिलासको साथ, हामीले चिनी र १०० ग्राम पानी राख्यौं। हामी प्रोग्राम Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, वेग २, बीकर बिना वाष्पीकरण लाई बढावा दिन।
एउटा कचौरामा हामीले ठूलो पीठो पानीको ठूलो चम्चासँग राख्यौं र त्यसलाई ह्वाइस्क वा काँटाले छोडिदियौं। हलचल नगरीकन आरक्षित सिरप थप्नुहोस्।
हामी पुतली ब्लेडमा राख्छौं, तयारीलाई गिलास र कार्यक्रममा राख्छौं Minutes मिनेट, १००º, गति १। गिलासबाट हटाउनुहोस् र चिसो हुन दिनुहोस्।
हामी केकलाई २ तहमा विभाजन गर्दछौं। तल्लो आधा स्ट्रबेरी जामको साथ फैलाउनुहोस् र अन्य आधा केक शीर्षमा राख्नुहोस्।
हामी चिसो पहेलोले छोप्यौं। हामी पर्खाल जर्सी मार्फत, ग्लूइंग लेमिनेटेड बदाम र चेरी वा क्यान्डेड फल, चकलेट आंकडा, रंगीन प्वाँख, इत्यादि संग सजावट।
थप जानकारी - भेरोमामा फ्रान्सेली टोस्ट
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: Huevos, १ १/२ घण्टा भन्दा कम, Postres, बच्चाहरूको लागि व्यंजनहरु, इस्टर रेसिपीहरू
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » Huevos » इस्टर मोना
यो कति सुन्दर छ र यदि तपाईले यसको शीर्षमा ठूलो समय बिताउनु भएको छ ... र तपाईले चाख्नु राम्रो समय हुन्छ, हाहा ... म तपाईबाट एउटा टुक्रा लिनेछु।
यो एकदम राम्रो छ। आज दिउँसो हामीले केही आफन्तहरूसँग खायौं र यो एकदम सफल भएको छ र केटीहरूले यसलाई मन पराए।
यो धेरै सुन्दर देखिन्छ।
जे होस् मलाई भन्नु छ कि भ्यालेन्सियामा मोनाहरू त्यस्ता छैनन्। यहाँ अनुकूलन अण्डा संग पेस्ट्री छ।
बबल__84 लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईं सहि हुनुहुन्छ, मेरो टिप्पणीको साथ मेरो मतलब यो थियो कि मोना डे पस्कुआ ती क्षेत्रहरूको विशिष्ट मिठो हो तर प्रत्येक क्षेत्रले उनीहरूलाई फरक तरीकाले बनाउँछ। यो मलाई लाग्छ कि क्याटालोनियाको क्षेत्रबाट बढी छ।
नमस्कार, एलेना र सिल्भिया मैले केहि दिन अघि तपाईको ब्लग पत्ता लगाएको थिएँ र मलाई तपाईका व्यंजनहरू मन पराउँछन् र मैले मेरा साथीहरूलाई सिफारिस गरिरहेको छु… ..
यो सप्ताहन्तमा मसँग तपाईंको धेरै भन्दा धेरै बनाउने विधिहरू छन्।
स्वागत छ कार्मेन !! उनीहरूले कोशिस गर्दा तपाईंको परिवार कस्तो देखिन्छ भनेर तपाईले हामीलाई भन्नुहुनेछ।
सुन्दर मोना, म यो गर्न कोसिस गर्नेछु मलाई थाहा छैन कि यो तपाईंको जस्तै बाहिर आउनेछ कि छैन, तर पक्कै पनि यो स्वादिष्ट हुनेछ। शुभ ईस्टर। शुभकामना।
Agueda लाई जवाफ दिनुहोस्
यो बनाउन सजिलो छ, एक स्वादिष्ट स्पन्ज केक जामले भरिएको छ र योक क्रीमले कभर गरिएको छ। यद्यपि केक धेरै जलाइएको छ, तर यो स्वाद लिने बेला उत्कृष्ट छ।
नमस्ते, यो कस्तो देखिन्छ? म तपाईंलाई थर्मोमिक्स २१ को साथ सोध्न चाहन्छु यो उही हो र अर्को प्रश्नले शीर्ष जर्दीले तिनीहरूलाई जलायो केटलान क्रीम जस्ता धन्यवाद ……………
Tm-21 को साथ, तपाईं यसलाई यस्तै तयारी गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो जर्को क्रीम मलाई तपाईले भनेको जस्तो जलाउनको लागि आएको छ तर यो गर्नु आवश्यक छैन। तपाईलाई सब भन्दा मन परेको जस्तो गर्नुहोस्।
तिमीसँग कति सुन्दर छ, म उनलाई सामान्यतया यहाँ देख्दिनँ, तर उनले खुशीको साथ त्यो प्यारा हा हा बाट एक काट्यो
यो मैले गरेको पहिलो कार्य हो, तर यसको वरिपरि हेरेर म योसँगै आएको हुँ र यो खराब भएको छैन, मलाई लाग्छ। स्वाद धेरै राम्रो थियो र चकलेट आंकडा धेरै राम्रो थियो। म तिनीहरूलाई माया गर्छु, म केटी जस्तै देखिन्छु।
कस्तो सुन्दर भयो! कती भाग्यशाली छ कि म भोली तपाईको घर जाँदैछु, हाहाहा। मलाई थाहा छैन त्यहाँ केहि बाँकी छ कि छैन, तर म निश्चित छु कि म सँधै स्वादिलो ​​चीज प्रयोग गर्नेछु!
तर तिनीहरूको नाक कस्तो छ! जब म धनी केही गर्छु घर मा देखाउन एक बहाना छ।
हेलो !! पेन्ट्स के छ ...। म आइतवारको लागि बनाउनेछु…। तर म अरू भोजनको बारेमा बुझ्दिन। तपाईं यसलाई कहाँ बेच्नुहुन्छ? के यो आवश्यक छ ?? 'तपाईंलाई लड़कीहरू धन्यवाद !!
एन्जेला, तपाईंले भर्खर प्रगतिशील गति -5-१० मा बदाम तर्काउनु पर्छ र जब तिनीहरू पाउडरको रूपमा छन् तपाईंसँग पहिले नै यो छ। यो उस्तै हो यदि तपाईंले छोलेको पीठोको लागि सोध्नु भयो भने।
धन्यवाद केटीहरु !! तर बदामहरू पग्लिएको हुन्छ, वा कच्चा बदाम ???? फेरि पनि धन्यबाद । र जब पिठो छोलाबाट हुन्छ, कुन चना प्रयोग गरिन्छ?
एन्जेलाब्रूलाई जवाफ दिनुहोस्
सजावटमा बदाम टुक्राइएको छ, पीठोमा ती कच्चा हुन्छन् र छोला कुनै पनि प्रकारको हुन सक्छ।
नमस्ते सिल्भिया, यो धेरै राम्रो देखिन्छ, हामी भ्यालेन्सीआमा छौं जहाँ हामी उनीहरूलाई प्यारा वा पान्केमाडो भन्छु, तिनीहरू केहि बन्स हुन्, जुन मैले थर्मोमिक्समा बनाउँछु, र स्वादिष्ट मेसालेन। यो नुस्खा यहाँ छ, र तपाईं मापन गर्नुहुन्छ यदि तपाईं3अण्डा मन पराउनुहुन्छ, योक मात्र, १० 105 जीआर। उल्टो चिनी, g 45 ग्राम चिनी, de ड्याकारिन ट्याब्लेट, १g० ग्राम। दूध, १०० ग्राम ०..8 डिग्री को जैतुन तेल को, g० grs। बेकरको खमीर, gr०० जीआर शक्ति आटा को। म २ मिनेट º०º स्पीड १ को लागी दुध तातो राख्छु र मैले सचारिन राख्छु, त्यसपछि मैले दुई किसिमका चिनी राख्छु, स्पीड,, १० सेकेन्ड र त्यसपछि योक, खमीर, तेल, हामीले स्पीड 170 १० सेकेन्ड राख्यौं, त्यसपछि आधा पीठो र एक चुटकी नुन, seconds० सेकेन्ड घुम्ने। And र हामी पिठो 100 मिनेट, बन्द गिलास स्पीड स्पाइक, कभर गरेर राख्छौं र यसलाई बढ्नको लागि कुर्दछ, म २ balls० जीआरको बलहरू बनाउँछु। म तिनीहरूलाई अलग गर्छु, म बेकिंग ट्रेमा put राख्न सक्छु, जुन बाहिर आउँछन्, जब उनीहरूको आवाजमा ट्रिपल हुन्छ म गोरेहरूलाई बलको छेउमा हिउँको बिन्दुमा उचाल्छु र माथि एक सानो मुन्टोनसिटो राख्छौं भने हामी चिनी राख्छौं र १º०º, minutes० मिनेटमा बेक गर्नुहोस्, सिल्भिया उनीहरूलाई राम्रो बनाउने कोशिश गर्दछ, तपाईं नाप्नुहुन्छ, चुम्बन गर्नुहुन्छ
एना -अल्कोय - भन्यो
नमस्ते Pepita, म Alcoy बाट Ana हुँ, र म तपाईंको नुस्खा बनाउन को लागी प्रयास गर्न जाँदैछु, तर मलाई समस्या छ र त्यो हो मलाई थाहा छैन उल्टो चिनी के हो। के तपाई मलाई दयालु हुनुहुन्छ बताउन सक्नुहुन्छ र म कहाँ किन्न सक्छु?
Ana -alcoy- लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार आना, तपाईंसँग ELENA Y SILVA को नोटपैड, चुम्बनहरूमा उल्टो चिनी पनी विधि छ।
पेपितासँग मसँग त्यस्तै प्यानकेक नुस्खा छ, म यसलाई बनाउनको लागि प्रयास गर्छु र तपाईंलाई कसरी भन्छु। तपाइँको नुस्खा को लागी धन्यवाद। अभिवादन र खुशी इस्टर
अना मारिया भन्यो
तपाई धेरै सुन्दर हुनुहुन्छ। तपाईसंग राम्रो इस्टर छ।
आना मारियालाई जवाफ दिनुहोस्
आना मारिया, मलाई खुशी छ कि तपाईलाई यो मन परेको छ, सत्य यो हो कि यो धेरै स्वादिष्ट थियो।
तपाईंलाई पनि ईस्टर नमस्कार।
नमस्ते सिल्भिया, तपाईले कसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ म अलिकन्टे क्षेत्रबाट हुँ र म पेपिटा मार्ती गार्सियाको नुस्खा बनाउन कोशिस गर्न गइरहेको छु, के तपाई मलाई औंल्याई चिनी भनेको के हो भन्दै दयालु हुनुहुनेछ? म कहाँ पाउन सक्छु?
म तिमीलाई भन्नेछु कि यो कसरी बाहिर आउँदछ।
अना, यहाँ उल्टो चिनी को लागि नुस्खा हो र यहाँ यो के हो भनेर वर्णन गर्दछ।
धन्यवाद xicas, मलाई यो साँच्चिकै मनपर्‍यो र मेरा छोरीहरूले jjjjjjjjjjjjjjjjjaaaaa सजावटमा भाग लिए .... अर्को पटक म फोटो लिन्छु।
मलाई खुशी छ कि तपाईले यो मनपराउनु भयो र तपाईले सजावट गर्न मजा लिनुभयो। शुभकामना
यो नुस्खा कति जना मानिसका लागि हो? धन्यवाद !! किनकि म यो गर्न चाहन्छु तर हामी adults वयस्क र २ बच्चाहरु, यो पर्याप्त छैन?
यो नुस्खा केक जस्तै हो र people व्यक्तिको लागि तपाईंसँग प्रशस्त छ।
यहाँ तपाईंसँग मेरो ब्लग प्रविष्टि छ, जहाँ मैले एलिकान्ते प्रान्तको विशिष्ट बाँदरहरू राखें।
नमस्कार, रेसिपी सम्बन्धी एक प्रश्न, किनकि म यसलाई भोलि बनाउनको लागि योजना बनाउँदैछु, तपाईको आरक्षित सिरपको अर्थ के हो ????